Intukuthelo uZuma echaza ngomuzi | Isolezwe
Intukuthelo uZuma echaza ngomuzi
Isolezwe / 16 November 2012, 11:42am /
UMENGAMELI Jacob Zuma uhlulekile ukufihla intukuthelo yakhe ngesikhathi ephendula imibuzo ePhalamende ngezindleko zokwakhiwa komuzi wakhe eNkandla osekuqubule okukhulu ukukhuluma nokugxeka okuqhamuka emaqenjini aphikisayo. UZuma uzwakale ebhoka nangolaka egxeka labo ababehlela ukugasela emzini wakhe ngoba bethi kusetshenziswe imali ecela ku-R250 million yabakhokhi bentela ukuwakha.
UZuma uthe zonke lezi zinto ngomuzi wakhe zihlukumeza umndeni wakhe wakwaZuma.
Ekhuluma ngokufutheka uZuma uthe iyamkhathaza indaba yabantu abagijimela ukusho izinto kodwa bengalwenzanga ucwaningo.
“Sengilahlwe ngecala, ngapendwa ngamnyama, kushiwo zonke izinto ngami kuthiwa ngikhohlakele. Akumele nijahe ukudingida izinto eningazazi,” kuphendula uZuma, inkulumo yakhe elandelwe yihlombe nemvunge ebiqhamuka kwenye ingxenye ePhalamende. Eqhubeka nokugxeka uthe kunabathile asebenze izwe lakholwa wukuthi uhulumeni wuye omakhele umuzi.
Ngesikhathi uZuma eqhubeka nokuchaza ngokwakhiwa komuzi wakhe kodwa engavezi gama lamuntu, uthe inkampani yabakhi eyakha eminye imizi eduze komuzi wakhe ayihlanganise lutho nokwakhiwa komuzi wakhe.
“Ngazakhela mina umuzi wami ngazikhokhela,” kucacisa uZuma kubonakala ukuthi usekwa nangamamanye amalungu ePhalamende.
Uveze nokuthi yena waxhuma kuphela izindlu ezinhlanu ezintsha emzini wakhe kwase kuqiniswa ezokuphepha. Uthe ngalezi zinto ezenziwa emzini wakhe akazi ukuthi kungenzeka kanjani ukuthi izindleko zakho zize zifike ku-R200 million.
Uthe abantu akumele babuze uNgqongqoshe wezemiSebenzi yoMphakathi uMnuz Thulas Nxesi yonke imibuzo le angeke akwazi ukuyiphendula.
Umholi weDA ePhalamende, uNksz Lindiwe Mazibuko, usukumile waphonsela uMengameli inselelo ethi banolwazi lokuthi kusetshenziswa izigidi kulo muzi kufakelwa ezokuphepha ezisezingeni, kufakwa nekheshi futhi ngaphakathi kunendawo yokuzivocavoca.
UMazibuko uthwale kanzima ezama ukubeka iphuzu lakhe ngomuzi kaMengameli okuze kwaholela ekutheni kungenelele uSomlomo uMnuz Max Sisulu ethi akwehliswe imimoya.
Umholi we-UDM, uMnuz Bantu Holomisa, uthe bakuqonda kahle ukuthi umuzi kaMengameli uyindawo edinga ukuhlala iqashelwe ngoba ihlala uMengameli.
UHolomisa uthe kumele kuthunyelwe ikomiti elizohamba liyohlola zonke lezi zinto okukhulunywa ngazo ngomuzi kaZuma ngoba labo asebeke baya ngaphambilini kukhona abangakuqondanga kahle.
“Abantu abayeke ukuthanda ukukhuluma bengenalo ulwazi lwezinto,” kuphetha uHolomisa enanelwa yihlombe. Uphenyo njengamanje ngomuzi kaZuma lusezandleni zoMvikeli woMphakathi, u-Adv Thuli Madonsela.